Isibongo seMunro ngokuqhelekileyo siyinkolelo yaseScotland yeenjongo uMonroe, kunye nemvelaphi ebonakalayo:
esithathwe kwigama lamaGaelic elithi Roothach , elisentsingiselo esithi "indoda evela kuRo," okanye umntu ovela kwinqanaba loMlambo iRe eDe County Derry.
Ukusuka kubunzana , okuthetha "umlomo" kunye ne- roe , okuthetha "umlambo." Kwi-Gaelic 'b' idla ngokuba 'm' - ngoko ke igama le-MUNRO.
Mhlawumbi ivela kuMaolruadh, kwi- maol , echaza "i-bald," kunye ne- ruadh , elithetha "obomvu okanye i-auburn."
Igama Igama: Isi-Irish, iScottish
Igama elongezelelweyo Iipellings : MUNROE, MUNROW, MUNROSE, MONRO, MONROE
Kuphi kwihlabathi i-MUNRO Igama linikezwa?
Nangona ivela e-Irlande, isibongo seMunro sisona sixhaphake eNgilani, ngokubhekiselele kwigama lomnxeba wokusabalalisa kwi-Forebears, kodwa iphakamileyo ngokusekelwe kwipesenteji yabemi eSkotland, apho ihamba njengegama le-61 eliqhelekileyo kwilizwe. Kuqhelekileyo kwiNew Zealand (133rd), e-Australia (257th), naseCanada (437th). Ngowe-1881 iScotland, uMnro kwakuyigama eliqhelekileyo, ngakumbi kwi-Ross kunye neCromarty naseSutherland, apho i-7th, ilandelwa nguMoray (14), iCaithness (18th), i-Nairn (21) kunye ne-Inverness-shire (21).
I-WorldNames PublicProfiler nayo inegama le-Munro njengento ethandwa kakhulu eNew Zealand, kunye nakuyo yonke iNorthern Zealand, kuquka i-Highlands, i-Argyll kunye ne-Bute, i-Western Isles, i-Orkney Islands, i-Moray, i-Aberdeenshire, i-Angus, i-Perth ne-Kinross, yase-South Ayrshire naseMpumalanga Lothian.
Abantu abaPhezulu abanegama lokugqibela lomasipala
UHH Munro - umbhali omfutshane waseBrithani wabhala phantsi kwegama lomthi "uSaki"
U-Alexander Munro we-Bearcrofts- wenkulungwane ye-17 lemikhosi yaseScottish
UCharles H. Munro - ugqirha waseCanada kunye nezopolitiko
UDonald Munro waseFoulis - wase-Ireland umhlali waseScotland; umsunguli weClan Munro
UJames Munro - uNkulumbuso we-15 we-Victoria, Australia
UWilliam Munro - wezityalo zaseBrithani
Izibonelelo zoGenesalogy for the name MUNRO
Le projekthi ye-DNA yamalungu angaphezu kwama-350 ivela kubaphandi bakaMunro ooyise bahlala eNyakatho Carolina. Eli qela lifuna ukuba ngumthombo kubo bonke abaphandi be-Munro emhlabeni wonke abanomdla wokudibanisa ukuhlolwa kwe-DNA kunye nophando lwemilo ukuze baqaphele ootata abaqhelekileyo base Munro.
Funda malunga nemvelaphi yeClan Munro kunye nentsapho yabo eFoulis Castle, kunye nokujonga umthi wentsapho yeentloko zeClan Munro, kwaye ufunde ukujoyina inhlangano yeClan Munro.
Umlambo weNtsapho yaseMunro - Akusikho into oyicingayo
Ngokuchasene noko ungayiva, akukho nto enjenge-Munro intsapho okanye iingubo zeengalo kwiNamero. Iingubo zeengalo zinikwe abantu ngabanye, kungekhona iintsapho, kwaye zingasetyenziselwa ukusetyenziswa kuphela ngabantu abangenakuphazanyiswa inzala yomntu oye wanikwa ingubo yeengalo.
I-FamilySearch - MUNRO Genealogy
Hlola iirekhodi ezingaphezu kwezigidi ezi-1.3 kunye nemithi yentsapho edibeneyo yomgca othunyelwe kwi-nomro ye-Munro kunye nokuhluka kwayo kwi-website ye-FamilySearch yamahhala, ebanjwe yiCawa likaYesu Kristu we-Saints-Day Saints.
Igama lomnxeba kunye neeNcwadi zoLondolozo lweNtsapho
I-RootsWeb ibamba iindidi zee-imeyile zamahhala zabatshintshi benombolo ye-Munro.
DistantCousin.com - Umlando we-MUNRO Genealogy & Family
Hlola ii-database zolwazi zamahhala kunye neefayili zodidi lwegama lokugqibela igama elithi Munro.
MUNRO Genealogy Forum
Khangela kwi-archives yezithuba malunga neentaba zika Munro, okanye uthumele umbuzo wakho we-Munro.
I-Genealogy ye-Munro kunye neNtsapho
Dlulisa amehlo kwiirekhodi zomnxeba kunye neengcombolo kwiirekhodi zezobuhlanga kunye neembali zabanye abantu abanegama elidumileyo elithi Munro kwi-website yeGenealogy Today.
Igama likaJACKSON igama kunye nomthombo
I-WHITNEY Igama lomnqophiso kunye nembali yentsapho
Yintoni ephosakeleyo ngeentengiso zeenja?
Indlela yokusebenzisa i-Sling Sling (kunye nesizathu sokuba ufanele)
Iphepha leKrismesi ebhaliweyo kunye neeBhodi eziHlangayo
Inkolelo kunye nokubizwa ngegama lesiJapane elithi "Subarashii"
Imfundo ekhethekileyo Imisebenzi ngaphandle kweeKholeji zeKholeji
Isikhokelo sokuPhumela kweehotele kwiindawo ezithetha iSpanishi
Ngaba uMekele-Mbembe unguD Dinosaur?